fitaovam-piasana Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana fampitaovana any Sina
fitaovana fitifirana jost
Tsy mila manozongozona ny tongotr'ilay tranofiara intsony ianao
Ho an'ireo mpamily semi-tranofiara antsika dia fahaiza-manao ilaina ny fikororohana ny tongotra, indrindra ho an'ny mpamily Swap Trailer sasany, ny fampihetsiketsehana tongotra dia lasa fomba fanao mahazatra. Saingy ankehitriny ny ankamaroan'ny tongotry ny tranofiara dia fiasan'ny mekanika tsotra, raha fiara mavesatra io dia tsy afaka mihozongozona fotsiny, amin'ity tranga ity, ny mpamorona omnipotent dia mampiditra tongotra hydraulic amin'ny tranofiara.
fitaovana fiantsonana karazana fuwa
Fametrahana sy fampiasana fitaovana fampitaovana (Fitaovana fampandehanana) Fametrahana ny tongotra mitanjozotra amin'ny tranofiara Semi Alohan'ny hametrahana azy dia zahao raha mifanaraka amin'ny zava-bita teknika sy ny fampiasana ny fepetra takiana ny Outrigger. endriny. 2.Ny taham-bokatra avoakan'ny sambo havia sy havanana dia tokony ho eo amin'ny axis ihany. 3.The outrigger dia tsy maintsy apetraka miaraka amin'ny tsipika famatorana, ny fatorana diagonal ary ny fatorana diagonal longitudinal ...
fitaovana kely fiantsonana
Ny antony tsy mety sy ny fanesorana ny fitaovam-pitaterana Fanosorana ny fitaovana fitaterana an-tanety Nandritra ny fivorian'ny fitaovana mpanohana, dia nanisy menaka lithium ankapobeny ho an'ny ampahany manosotra. Mba hisorohana ny tsy fahombiazan'ny menaka aorian'ny fampiasana maharitra, tazomy ny fanosorana tsara ny fitaovana mpanohana ary halavaina ny fiainam-panompoany dia ilaina ny manampy ny menaka isaky ny faritra tsy tapaka. 1.Ny tongotra anatiny miaraka amin'ny fitoeran-drano fitehirizana solika, tsorakazo ary voanjo dia manosotra tena sy maintena ...